Ngwaọrụ YouTube kacha mma Smes kwesịrị iji bido taa - SoNuker
YouTube bụ otu n'ime ngwa azụmaahịa na -eduga maka azụmaahịa taa. Ma ịchọrọ ịkwalite mmata akara, tinye ndị ahịa gị, ma ọ bụ kwalite ngwaahịa ọhụrụ, ahịa YouTube bụ ngwa dị ike iji nweta ebumnuche azụmahịa gị niile.
May nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ pere mpe na ọkara (SME) nke na-abanyebeghị na oghere YouTube. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịbụ SME na -achọ ịbawanye ikike ịre ahịa YouTube gị. N'agbanyeghị ebumnuche ịre ahịa, enwere ụfọdụ ngwaọrụ YouTube dị mma iji nyere gị aka rụpụta ezigbo nsonaazụ:
Mee ka akara aka gị na ntinye aka ndị na-ege ntị na vidiyo YouTube mepụtara nke ọma. Ịmepụta vidiyo na -atọ ụtọ dị mkpa iji nweta onwe gị na ndị na -ege gị ntị ngwa ngwa karịa ndị asọmpi gị. Ọzọkwa, imepụta vidiyo YouTube adịghị ọnụ.
Mepụta ụdị vidiyo dị iche iche iji nye ndị na -ege gị ntị uru karịa ka ọdịnaya ahụ na -atọ ụtọ. Ụfọdụ ọdịnaya ahịa vidiyo na -emeri nke ị nwere ike iji maka SME gị gụnyere:
Olee otú-Iji Vidiyo -Ese vidio na-ewu ewu n'ihi na ha na-edozi nsogbu nye ndị na-ege gị ntị. Chọọ nsogbu na ihe ịma aka metụtara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, wee mepụta vidiyo Otu esi eme ya.
Vidiyo Ngwaahịa - Mara ndị ahịa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị na vidiyo nkọwa. Ị nwere ike ịkọwa ngwaahịa/ ọrụ gị nke ọma, na -agabiga atụmatụ, ebumnuche na uru ndị ahịa.
Ndepụta - Listicles na -ebuga ozi gbasara azụmahịa gị n'ụzọ na -adọrọ mmasị ma dịkwa mfe nghọta maka ndị na -ege gị ntị. Ị nwere ike iji infographics na onyonyo mee ka ndepụta gị bụrụ ihe ọchị na ozi.
Vidiyo BTS -BTS ma ọ bụ vidiyo na-eme ihe nkiri bụ ụzọ kachasị mma iji gosipụta ụdị mmadụ nke akara gị. Vidiyo BTS na -ewetara ndị na -ege gị ntị ọdịbendị ọrụ gị yana ndị na -eme ika gị ihe ọ bụ.
Nke a bụ ngwa ọrụ YouTube maka ijikwa vidiyo na ọwa gị. Ị nwere ike iji ngwa ahụ dị ka ngwa mkpanaka ma ọ bụ nweta ya site na weebụ.
Ngwaọrụ a na -enye ikpo okwu maka ijikwa ọwa YouTube gị zuru oke. Ọ na-enyekwa nyocha oge n'ezie iji nyere gị aka ịme mkpebi azụmaahịa dabere n'eziokwu.
Nchịkọta ngwa ngwa nke ngwa a:
Nweta data ozugbo gụnyere vidiyo kacha elu, lelee ọnụọgụ, oge nche na ego e mere atụmatụ ya.
Nyochaa ọnụego njikọta ndị na -ege ntị na ọnụ ọgụgụ na nkezi oge nlele, vidiyo dị elu na oge nlele.
Nyochaa iru vidiyo site na nghọta dị ka ọnụọgụ CTR, ihe ngosi, ndị na -ekiri ihe pụrụ iche na nkọwa isi iyi okporo ụzọ.
Nweta nghọta ka mma n'ime ndị na -ege ntị lekwasịrị anya yana nkọwapụta na ndị na -ekiri pụrụ iche, ndị debanyere aha, ihe ngosi ndị ọrụ, yana usoro nlele onye ọrụ.
Nweta atụmatụ ị nweta ego site na nghọta n'ime metrik dị ka ọnụ ahịa kwa maịl, ego ị nweta n'otu maịl na vidiyo nwere ọnụ ahịa ego dị elu.
Dezie vidiyo n'ụzọ dị mfe ma tinye ndepụta okwu ka ịbawanye iru.
Nyochaa, nyocha, ma jikwaa ngalaba nkọwa ọwa.
TubeBuddy dị ka ngwa mgbakwunye ndọtị nchọgharị. Ngwa a mara mma nwere ike inyere gị aka na ebumnuche ahịa dị iche iche maka ọwa YouTube gị.
Na -enyere ajụjụ ajụjụ na nkọwa onye ọrụ na ọwa YouTube gị aka. Ị nwere ike ịtọ ngwaọrụ iji nyochaa nzaghachi dabere na oke dị ka mkpa, spam, adịghị mma, na ndị ọzọ.
Na -enyere gị aka ịchọpụta isi okwu kwesịrị ekwesị maka vidiyo gị ka vidiyo gị nweta ọkwa dị mma ma nweta echiche ndị ọzọ.
Na -enyere nnwale vidiyo A/B aka ịghọta ka vidiyo gị ga -esi eme.
Na -enyere aka n'ịchọpụta mkpado vidiyo na -ewu ewu. Ị nwere ike iji nghọta mkpado mepụta mkpado lekwasịrị anya na nlele maka vidiyo gị.
Site na TubeBuddy, ị nwere ike bulie vidiyo gị maka iru kacha. Ngwaọrụ a dị n'ụdị efu na akwụrụ ụgwọ. Ọ bụ ụzọ dị ọnụ ala iji gbakwunye atụmatụ azụmaahịa YouTube gị.
Ahịa YouTube bụ n'ezie atụmatụ dị ukwuu iji nweta ọnụnọ akara dị ike. Mana atụmatụ a na -arụ ọrụ naanị mgbe ị mepụtara vidiyo dị mma maka ndị na -ege gị ntị. Ngwaọrụ YouTube dị n'elu na -enyere gị aka ịghọta ndị na -ege gị ntị ma mepụta vidiyo na -egbo mkpa ha n'ezie.
Mee ka ahịa vidiyo gị gaa nke ọma wee jiri ngwa YouTube ndị a na-eme nke ọma na-eto ụdị gị.
Ngwaọrụ YouTube kacha mma Smes kwesịrị iji bido taa nke ndi dere SoNuker, 26 August 2021